» जीवनको सुख कहाँ छ ?
२७ जेष्ठ २०७६, सोमबार १८:११ प्रकाशित
जेष्ठ २७ – सुख । दुई अक्षरले बनेको यो शब्द वरीपरी नै हाम्रो जीवन घुमेको छ । हामी धन कमाउँछौ किन ? सुखका लागि । हामी सफल बन्न चाहन्छौ किन ? सुखका लागि । हामी उन्नती गर्न चाहन्छौ किन ? सुखका लागि । हामी घर किन्छौ, गाडी किन्छौ, बैंक ब्यालेन्स गर्छौ किन ? सुखका लागि ।